Ọchịchị - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Gbasara anyị > Ọchịchị
Anyị bụ ndị ọrụ ebere e debara aha (mba 1082972) na ụlọ ọrụ edebanyere aha (enweghị 4071152).
Anyị nwere ndị nlekọta iri na atọ bụ ndị kwupụtara ọrụ dịịrị anyị ime mkpebi na iduzi nzukọ a.
Na nzukọ nzukọ zuru oke, nke ndị nlekọta niile na-eso na ndị isi njikwa anyị, anyị nwere ọtụtụ kọmitii, nke lekwasịrị anya:
Kọmitii na-ahụ maka ego na izugbe (F&GP) emekọ ihe metụtara akụrụngwa yana ọ bụ ọrụ ya maka inyocha ihe gbasara ego.
Kọmitii Atụmatụ Ndị Mmadụ na Ndị Mmadụ (P&PS) na-emekọ ihe metụtara ọrụ mmadụ na ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ.
Kọmitii Ogo na formanrụ Ọrụ (Q&P) na-enyocha ogo na arụmọrụ n'ofe niile ọrụ.
Kọmitii Mmepe (DC) bụ ọrụ maka nyochaa mkpa ndị na-apụta na ịnọgide na-enwe nchịkọta nke mmepe ọrụ, ntinye na ntinye ego na mmemme mmemme ọhụụ.
Anyị na-ahụ maka kọmịshọn na-ahụ maka ọrụ ebere ma iwu chọrọ ka anyị mepụta ihe akụkọ kwa afọ, nke dị maka ọha.
Dị ka Uche Obodo, ndị otu anyị na National Mind gọọmentị chọrọ ka anyị soro Mind Quality Mark. Nke a na-enyocha site na National Mind (www.mind.org.uk) ma hụ na enwere nkwekọrịta ụfọdụ n'ofe gọọmentị.